Sarkaal sare oo katirsan Ruushka Oo lagu dilay dalka Suuriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Sarkaal sare oo katirsan Ruushka Oo lagu dilay dalka Suuriya.
On Jul 12, 2017 255 0
Dowladda Ruushka oo ciidamo ay ka joogaan dalka Suuriya ayaa halkaas waxay kala kulmeysaa dhiig bax joogta ah oo dhanka ciidamada iyo dhaqaala ah, waxaana dowladani ay ka garab dagaalameysaa nidaamka dhiigyacabka Bashaar Al-Asad.
Sarkaalkii ugu dambeeyay ee dowladda Ruushka looga dilo dalka Suuriya, wuxuu ahaa la taliye milliteri oo jago sare ka hayay ciidamada Ruushka.
Wasaaradda dagaalka dowladda Ruushka ayaa xaqiijisay geerida Cabtan milliteri ahaana la taliye dhanka milliteriga, una joogay dalka Suuriya sida ay wasaaradu sheegtay tababarida malleeshiyaadka Nusayriyada , kaas oo lagu magacaabo Nicklooy Afansif.
Sarkaalkan ayaa lagu dilay duqeyn loo adeegsaday Hoobiyaha oo ay ku garaaceen jamacaaadka ka dagaalama dalka Suuriya saldhig milliteri oo ay Nusayriyadu ku leeyihiin galbeedka magaalada Xammaah ee dalka Suuriya.
Sarkaalkan ayaa laga yaabaa in meydkiisa loo qaado dalka Ruushka si halkaas loogu aaso, waxaana dowladda Ruushku sheegtay in la siin doono billad sharfeed, taas oo la siiyo saraakiisha ciidamada marka ay geeriyoodaan.